u-Raj no-Mandhana banqobisa i-India women ngendlela encomekayo
EAST LONDON, SOUTH AFRICA - FEBRUARY 16: Dané van Niekerk of South Africa during the 2nd Womens T20 International match between South Africa and India at Buffalo Park on February 16, 2018 in East London, South Africa. (Photo by Richard Huggard/Gallo Images)
u-Mithali Raj no-Smriti Mandhana bashaye o-50 ukusiza iqembu labo linqobe ngama-wicket ayisishagalolunye bedlala nama-Momentum Proteas e-Buffalo Park ngoLwesihlanu. Izivakashi zingaphambili ngo-2-0 kwi-series enemidlalo emihlanu ezophela e-Kapa ngo-24 February.
u-Raj, ongaphumanga enama-runa angu-76 emabholeni angu-61 (8 fours) uzitholele okwesibili kulandelana i-Player of the Match award, ukhombise isipiliyoni sakhe bejaha u-142/7 we-South Africa. Lomdlali okhulule uhlanganise i-partnership yokuqala yama-runs angu-106 eshaya no-Mandhana (57 runs off 42 balls, 4 fours, 3 sixes), belibeka kahle iqembu labo ukuze banqobe ngahambi kokuthi u-Moseline Daniels (1/21) ekhipha i-wicket eyodwa kuphela ekhiphela iqembu lasekhaya.
Ukapteni we-India, u-Harmanpreet Kaur (7* of 12 balls) usale emuva kwi-partnership yakhe yesibili yama-runs angu-38 eshaya no-Raj, wavumela umdlali omdala ahole beyonqoba.
Amathuba amaningi okuthola ama-wicket kanye ne-spell esincomekayo esiphoxwe ukuvimba kabi kulimaze iqembu lasekhaya lokufika eduzane kokunqoba, kwathi izivakashi zakwenza kwabukeka sengathi kulula uma beqhathaniswa. U-Raj uwuqede kahle umdlalo, washaya i-boundary kuphosa u-Ismail ukunqoba kusele amabhola amahlanu.
Ekuqaleni kokusu, u-Suné Luus no-Nadine de Klerk bathole ama-runs amaningi kuma-Proteas nama-runs angu-33 no-26 ngokulandelana kwabo beyohlela umphumela wabo, obungaphezulu kwi-wicket ehamba kancane e-East London. Abanye eqenjini bathole ama-runs angadlulanga ku-20 ku-Shabnim Ismail (16* off 12 balls), u-Chloe Tryon (15 off 11), u-Lizelle Lee (15 off 12) nokapteni u-Dané van Niekerk (15 off 18) emuva kokuthi kuthiwe abashaye kuqala.
Kuzomele i-South Africa ishintshe izinto njengoba i-series iyela kumdlalo okumele bawunqobe e-Goli ngoMgqibelo. Amaqembu azodlala umdlalo wokuqala wama-double-headers amathathu kanye neqembu labesilisa e-Bidvest Wanderers Stadium ngo-09:00 (SAST). Umdlalo uzovezwa ku-SuperSport 2.
i-India inqobe kumdlalo wokuqala we-T20 Ama-Proteas women azimisele ngokubuya Mandhana no-Yadav banqobela i-India women i-ODI series u-Mandhana, u-Goswami no-Pandey babeka i-India ngaphambili ngo-1-0 bedlala ne-Proteas women u-Van Niekerk ulindele ukudlala ekhaya i-CSA imemezela amaqembu ama-Proteas Women’s ODI ne-T20 bedlalela ekhaya ne-India i-CSA ihalalisela u-Van Niekerk no-Khuzwayo ngokuthola ama-SRSA Awards Ama-Proteas esifazane akhela kuhambo lwabo lwendebe yomhlaba AmaProteas esifazane anezinombolo ezincomekayo i-CSA ihalalisela amaProteas amathathu ngokufakwa eqenjini le-ICC WWC AmaProteas Women azingela ukuqopha umlando